Maitiro ekudzikisa Mutengi Wako Wekutora Mutengo weMaxim ROI | Martech Zone
Paunenge uchangotanga bhizinesi, zvinokwezva kukwezva vatengi nechero nzira yaunogona, zvisinei nemutengo, nguva, kana simba rinobatanidzwa. Nekudaro, paunodzidza nekukura unozoona kuti kuyera mutengo wekutenga kwevatengi neROI kwakakosha. Kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kuziva yako mutengi wekutora mutengo (Các).
Maverengero Ekuita Mutengi Mutengo
Kuti uverenge CAC, iwe unongoda kupatsanura ese ekutengesa uye ekushambadzira mari inosanganisirwa nekuwana mutengi mutsva mukati menguva yakatarwa. Kana iwe usiri kujaira, isu tichaenda pamusoro CAC formula pano:
Kutaura zvazviri, kana Karl akashandisa madhora gumi kuti atengese stand yake yeremonade uye akaita kuti vanhu gumi vatenge chigadzirwa chake muvhiki imwe chete, mari yake yekutenga svondo iroro yaizova $10.
Ndeipi Mutengi Wako Yekutora Mutengo?
Ndiwo muenzaniso wakapfava uri pamusoro. Ehe mukati mekambani nhanho yebhizinesi, CAC yakanyanya kuomarara:
Total Marketing -izvi zvinofanirwa kubatanidza vashandi vako vekushambadzira, masangano ako, midziyo yako, marezinesi esoftware, uye chero kushambadzira kana kutsigira kwaunosanganisa mukuwana itsva mutengi.
Total Sales Expenses - izvi zvinofanirwa kubatanidza vashandi vako vekutengesa, makomisheni avo, uye mari yavo.
Kumwe kuomarara kuyera nemazvo nguva yako yakatarwa iyo vatengi vakawanikwa. Kushambadzira uye kutengesa mari nhasi hazvikonzeri nekukurumidza mutengi anowanikwa. Iwe unozofanirwa kufungidzira rwendo rwako rwepakati pekutenga… apo munhu angangove mutengi anobva aziva chigadzirwa chako kusvika kwaanoshandura. Kazhinji nguva, izvi zvinogona kuve mwedzi kana makore zvichienderana neindasitiri, kutenderera kwebhajeti, uye nhaurirano.
Ndosaka zvichikosha kuti ubatanidze inbound zano rinoratidza zvirinani kuti tarisiro yakanzwika pamusoro pako, pavakatanga kubatana newe, kusvika kuzuva ravo chairo rekutendeuka.
Maitiro ekudzikisa Mutengi Wako weKuwana Mutengi
Kana iwe uchinge waziva maverengero eCAC yako, iwe unenge uchida kuidzikisa kuti iwe uri kuona purofiti ine hutano kubva kune mumwe nemumwe mutengi. Chimwe chinhu chaunoda kuita chengetedza vatengi varipo - kutengwa kwevatengi kunogona kuita mari inosvika kanomwe kupfuura kutengesa kune vatengi varipo, shure kwezvose!
Kuti uwane mamwe matipi ekugadzirisa mutengo wako wekutora mutengi, GetVoIP's infographic pazasi inoratidza nzira shanu dzekuvandudza. Semuenzaniso, kugadzira zvinonakidza uye zvine musoro zvemukati zvinogona kukubatsira iwe kuvaka chisungo nevatengi chinovasvitsa kunzvimbo yavo yekutenga nekukurumidza. Wedzera mune mamwe maCTA anouraya uye unogona kuwana vatengi vachitenga pane yekutanga chidimbu chemukati chavanodya!
Iwe unogona zvakare kushandisa kushambadzira otomatiki kune yako mukana. Semuyenzaniso, vanyoreri veBirchbox vanogashira email yekugamuchira inoteverwa netambo yeemail pane matipi erunako uye matekiniki ekugadzira. Vazhinji vevanhu ava havasati vatombotenga, asi kambani iri kupa yakawanda yemahara kukosha kumberi. Iwe unogona zvakare kushandisa chatbots, otomatiki ega maemail uye masocial media mishandirapamwe kuti uwedzere kushanda zvakanaka.
Unogona kuwana aya nemamwe matipi pazasi. Nekuziva nekuvandudza CAC yako, unozokwanisa kuona kudzoka kwakawanda pakudyara, uye icho chinogara chiri chinhu chikuru kuona!
Tags: mutengo wekuwanaaffiliate marketingaffiliate chirongwabhirabhokisicaccac formulakuverenga cacContent Marketingchiyero chekushandura optimizationmutengo pakutengacrokutenga vatengiMutengi wekutora mutengo formulakuchengetwa kwevatengiFormulagetvoipsei kuverenga cackunatsiridza mwero wekushandurwakunatsiridza cromarketing automationmari yekushambadziranhamba yevatengi vakawanakudzokera shuremari yekutengesa